အမေရိကန်နိုင်ငံ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိ စာသင်ကျောင်း ၂၆ ကျောင်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားနေ - Xinhua News Agency
ချီကာဂို၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ အီလီနွိုက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန (IDPH) က ကိုဗင်-၁၉ ရောဂါ (COVID-19) ဖြစ်ပွားနေသော စာသင်ကျောင်း ၂၆ ကျောင်းရှိပြီဖြစ်ကာ ချီကာဂိုမြို့ပြဧရိယာရှိ ကျောင်းအမြောက်အများ ပါဝင်ကြောင်း Chicago Tribune က ဩဂုတ် ၃၁ ရက်၌ သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။စာသင်ကျောင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အရေအတွက်သည် အားကစားပွဲများကဲ့သို့ စာသင်ကျောင်းမှကြီးမှူးကျင်းပသော လှုပ်ရှားမှုများ အပါအဝင် ကျောင်းအစီအစဉ်များမကျင်းပမီနှင့် ကျင်းပပြီး အနေအထားကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားသည်။
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုစာရင်းဝင် စာသင်ကျောင်းအများစုမှာ ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၅ ဦးအောက်ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်က သတ်မှတ်ထားချက်မှာမူ ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၅ ဦးနှင့် ယင်းထက်ပိုရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အပတ်စဉ် မွမ်းမံထားပြီး ဩဂုတ် ၃၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသော အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၏ စာသင်ကျောင်းဆိုင်ရာ ကိုဗစ်-၁၉ အချက်အလက်များအရ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိ၍ ထိတွေ့မှုခြေရာခံခြင်းဖြင့် ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိထားသည့် စာသင်ကျောင်း ၅၄၆ ကျောင်းလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Pritzker ၏ စာသင်ကျောင်းအတွင်း နှာခေါင်းစည်းမတပ်မနေရအမိန့်ကို လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ ဖွင့်လှစ်ထားသော အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း အရေအတွက်မှာ ယခုသီတင်းပတ်တွင် ဆက်လက်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။
အီလီနွိုက်ပြည်နယ် ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့က ၂၀၂၁-၂၂ ပညာသင်နှစ်စတင်ချိန်မှစ၍ အီလီနွိုက်စာသင်ကျောင်းခရိုင် ၆၂ ခုတွင် နှာခေါင်းစည်းမတပ်မနေရအမိန့်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျက်ရှိကြောင်း တင်ပြထားသည်။ (Xinhua)
COVID-19 outbreaks reported at 26 schools in U.S. state of Illinois
CHICAGO, Aug. 31 (Xinhua) — The Illinois Department of Public Health (IDPH) on Tuesday listed 26 Illinois schools with COVID-19 outbreaks, including several in the suburban Chicago areas, Chicago Tribune reported on Tuesday.
Illinois State Board of Education has reported that since the start of the 2021-22 school year, 62 Illinois school districts are failing to comply with the mask mandate. Enditem
Photo : People arrive ataChicago Cubs’ game with no attendance limits in Chicago, the United States, on June 11, 2021. (Photo by Joel Lerner/Xinhua)